ပညာတော်သင် course (留学コース) | 日本語学校 語学留学 TIJ東京日本語研修所 Tokyo Institute of Japanese
ပညာတော်သင် course (留学コース)
ဂျပန်တက္ကသိုလ်၊ဘွဲ့လွန်သင်တန်းကျောင်း ၊အထူးပြုဘာသာရပ်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းဆက်တက်ချင် သူများအတွက် course ဖြစ်သည်။
ဒီသင်ရိုးညွှန်းတန်းတွင် basic level,intermidiate level,advanced level ဟုရှိပြီး၊ ကျောင်းသားများက မိမိ level နှင့်ကိုက်ညီသော ဂျပန်ဘာသာအဆင့်ကိုသင်ကြားနိုင်သည်။ ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ဆန္ဒရှိသူများ ကျောင်းဆက်တက်ရန်လမ်းညွှန်မှုများဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်မည့် စွမ်းရည်ကိုပျိုးထောင်ပေးခြင်း။
level နှင့်ညီသော အတန်းများရှိခြင်း။
ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများသည် အခြေခံအားဖြင့် ကျောင်းသားဗီဇာလိုအပ်သည်။
လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့ နေထိုင်ခွင့်လျောက်ထားခြင်းကို TIJ ကျောင်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊လူတွေ့စာမေးပွဲများကိုဆောင်ရွက်၍၊ ပညာတော်သင်ရန်ရည်ရွယ်သူများရဲ့ အခြေခံသင်ကြားနိုင်မှုစွမ်းရည် နှင့် စရိတ်ကုန်ကျနိုင်မှုတို့ကို ညှိနှိုင်းကာ လျှောက်လွှာတင်ပေးသည်။ အထက်ပါအချက်အလက်များအားဖြင့် TIJ ကျောင်းသည် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
၂နှစ် ၄လ ၁၆၀၀ နာရီ မနက် ၉:၀၀ မှ ၁၂:၃၀
မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ မှ ၁၆:၃၀
၁နှစ်၉လ ၇လ ၁၄၀၀ နာရီ
၁နှစ်၆လ ၁၀ လ ၁၂၀၀ နာရီ
၁နှစ်၃လ ၁လ ၁၀၀၀ နာရီ
Please check Tuition fees list.
ကျောင်းဝင်သောအခါအခြားလိုအပ်သော　ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုမှာနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်ကျန်းမာရေး အာမခံစနစ်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများအားလုံးသည် နေ့စဉ်နေထိုင်သွားလာသူများဖြစ်၍ မတော်တဆ အမျိုးမျိုးသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်း၊ နေထိုင်မကောင်းခြင်းစသည့် ကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျန်းမာရေးအာမခံပေးသွင်းထားသော ကျောင်းသားများ သည် ဆေးကုသစရိတ် စုစုပေါင်း၏ 30% ကိုသာ ပေးသွင်းရမည့် အာမခံစနစ်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးအာမခံငွေကို ကျောင်းမှတပေါင်းတည်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် အထက်ပါကျောင်းဝင်ကြေး ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူ ပေးဆောင်ရပါမည်။
Please refer to the English page for details.
တနလာင်္မှ သောကြာ course
Student life (En)